Ukwenza iShakespeare - Udliwano-ndlebe noBen Crystal
Udliwano-ndlebe noBen Crystal
UBen Crystal ngumlobi weShakespeare kwi-Toast (eshicilelwe yiIcon Books), incwadi entsha ekhupha inkolelo yokuba uShakespeare inzima. Apha, uxela iingcamango zakhe malunga nokwenza uShakespeare kwaye utyhila iingcebiso zakhe eziphezulu kubadlali bokuqala.
About.com: Ngaba kunzima ukwenza uShakespeare?
UBen Crystal: Ewe, ewe ... kwaye kufanelekile! Le midlalo ingaphezulu kweminyaka engama-400 ubudala. Zineenkcubeko zenkcubeko kunye neengxelo ezifihlakele ngokupheleleyo .
Kodwa kunzima ukwenza ngenxa yokuba uShakespeare wayelungile kakuhle ngokungena entliziyweni yomntu - ngoko, njengomdlali ongenakuzivumela ukuba uzibambe. Ukuba awukwazi ukungena ekujuleni komphefumlo wakho, zihlolisise ukugqithisa kwakho, uye kwindawo engendawo njenge-Othello okanye iMacbeth, ngoko akufanele ube segaleni.
Kufuneka ucinge ngeentetho ezinkulu kwiShakespeare njengezona zinto zibaluleke kakhulu umlinganisi owake wathetha; kufuneka bakhululwe ngesifuba sakho sinqulwe, intliziyo yakho ibonakale, kwaye unomdla omkhulu. Kufuneka udilize amagama avela esibhakabhakeni. Ukuba awuveki ukuba uqhube umqhudelwano xa usuphelile, awukwazi ukwenza okulungileyo. Kudinga isibindi ukuzivula kubaphulaphuli abanjalo, ukuvumela ukuba babone i-insides yakho ngaphandle kokuzama ukuzama ukubonisa.
About.com: Ingcebiso yakho kumntu owenza uShakespeare okokuqala ngqa?
UBen Crystal: Musa ukuyiphatha kakuhle, kodwa ungayiphathi kakuhle kakhulu.
Ndiyazi ukuba oko kuzwakalisa ukuphikisana, kodwa kuyafana nombono wokwenza inyaniso kwisikratshi esikhulu, abadlali abaninzi abajamelana nayo. Ubungakanani obuqilima, kwaye uShakespeare ucela ukuba uhlangabezane nale ngcamango enkulu kunye neemvakalelo ezihlala zikhokelela ekusebenzeni ngokugqithiseleyo-ukuhlala kude nemisebenzi emikhulu kunye nokuzibonakalisa ngaphezulu.
Uninzi lwezinto ofuna ukuyazi kwikhasi sele likhona. Ngoko kukhohlakele, kwaye kufuneka usebenze kuyo, kodwa yinto enhle kakhulu kwihlabathi. Yonwabele. Funda imigca yakho kakuhle ukuba uhambe okanye uhlambe xa utsho. Kanye kuphela xa beyingxenye enzulu, ungaqala ukudlala. Uninzi lwabantu bathatha imidlalo kaShakespeare ngokugqithiseleyo, kwaye ukhohlwe elo lizwi elibalulekileyo: "ukudlala". Umdlalo, ngoko ujonge! Awukwazi "ukudlala" kunye nabalingani bakho xa uzama ukukhumbula imigca yakho.
About.com: Ngaba uShakespeare ushiye izikhokelo kubadlali abakulo mbhalo?
UBen Crystal: Ewe, ndicinga njalo. Kwakhona kunjalo noPeter Hall, uPatrick Tucker, kunye nabanye abancinci. Ingaba okanye akunjalo wenza njalo uya kuphakanyiswa kwingxoxo. Ukubuyela kwisicatshulwa sokuqala njengePolio yokuqala kukunceda. Yikho yokuqala yokuqokelela yemidlalo kaShakespeare, ehlelwe ngabadlali ababini abahamba phambili. Baya kuba befuna ukudala incwadi malunga nendlela yokuqhuba imidlalwana yabo, kungekhona indlela yokuyifunda - i-80% ye-Elizabethan ayikwazi ukufunda! Ngoko iFolio yokuqala ifana neempendulo zeShakespeare njengoko sikwazi ukuzenza.
Xa abahleli banamhlanje bemidlalo benza i-edition entsha, babuyela kwiFolio yokuqala baze basuse iileta ezinobumba, batshintshe ukupela nokutshintsha iintetho phakathi kwabalinganiswa kuba bajonga kwimidlalo evela kwimbono yokubhala, kungekhona .
Ukukhumbuza ukuba inkampani kaShakespeare yayiza kwenza umdlalo omtsha imihla ngemihla, abazange babe nexesha elininzi lokuzihlaziya . Ngako oko, inkolelo iya kuba ininzi yesalathiso sesigaba esibhaliweyo kwisicatshulwa. Enyanisweni, kunokwenzeka ukuba usebenze apho unokuma khona, ukukhawuleza ukuthetha, kunye nesimo sengqondo sakho somntu, konke okuvela kwisicatshulwa .
About.com: Kubaluleke kangakanani ukuqonda ipentameter ye-iambic ngaphambi kokuba wenze?
UBen Crystal: Oku kuxhomekeke ekubeni uhlonipha kangakanani umbhali osebenza naye. Uninzi lweemidlalo zikaShakespeare zibhalwa kweso sakhiwo esithile, ngoko ukungaziboni ukuba kuya kuba budenge. Iambic ipentameter yisingqisho solimi lwethu lwesiNgesi kunye nemizimba yethu - umgca weso sibongo unesigqi esifanayo njengentliziyo yethu. Umgca we-intambameter ye-iambic uzalisa imiphunga yomntu ngokugqibeleleyo, ngoko ke isingqikithi yentetho.
Omnye unokuthi isingqungquthela somntu esivakalayo kwaye uShakespeare wasebenzisa ukuba ahlolisise into yokuba ngumntu.
Kwinqaku encinane engabonakaliyo, i- pambameter ye-iambic ngumgca weengqungquthela kunye neelwimi ezilishumi, kwaye zonke iisllabhu ezifunyenweyo zineengcinezelo ezincinci . Yilo lathiso ngokwalo - iingcinezelo ezinamandla zivame ukuwela kumazwi abalulekileyo.
About.com: Kuthekani malunga nemigca engaphantsi kwama-syllable?
UBen Crystal: Ewe, mhlawumbi uShakespeare wayengenakubalwa kwaye wayeyi-idiot - okanye wayengumongameli kwaye wayesazi into awayenzayo. Xa kukho izilwanyana ezingaphantsi kweshumi kumgca, unika igumbi lomdlali ukuba acinge. Ukuba imitha iyatshintsha nakweliphi na indawo, isalathiso esivela kuShakespeare kubadlali bakhe malunga nomdlalo abadlala ngawo. Kuzwakala kunzima, kodwa ngokwenene, xa uyazi oko ukhangeleyo, kuyacaca ngokucacileyo. U-Shakespeare wayesazi ukuba abadlali bakhe babeya kuba nale ngqungquthela egeleza emithanjeni yabo, kwaye ngaba ngabaphulaphuli bakhe babeza kuba. Ukuba wayiqhekeza isigqi, babevakalelwa.
Ukungaqondi i-pambameter ye-iambic njengomdlali we-actor ukungaqondi i-80% yesitayela sikaShakespeare esibhalwe kuso, kwaye inani elifanayo kwakhona le nto eyenza ukubhala kwakhe kube nzima.
I-Shakespeare kwi-Toast yi-Ben Crystal iphepishwa yi-Icon Books.
I-Women's Shakespeare kaRichard III
I-Shakespeare Quotes ephezulu
Uludwe lweShakespeare Plays
I-Romantic Shakespeare Quotes
Shakespeare Quotes Death
Inkathazo, ukuLungisa, iMbali?
Indlela yokusebenzisa ii-Qukes zeShakespeare
I-10 yeeNkcukacha eziPhezulu zeShakespeare
"I-Ado Eninzi Ngento Akukho"
Uluhlu olungabonakaliyo lweShakespeare oluPhambili lokudlala
Iingcaphuno ezivela kwiShakespeare Plays
9 Iingcebiso zoKhuseleko ukuwela uMlambo okanye ukusasaza
Inkcazo ye-Movement Edge Movement
Ukudweba ihashe kwiPencil Colors
I-American Man Sun Dance
Imfazwe Yehlabathi I: Imfazwe yokuqala yaseMarne
Indlela yokufumana iiJumpers eziPhakamileyo
Imfazwe YaseMerika: Uwonke u-Edmund Kirby Smith
I-Top 10 ye-Female Singers yaseLatin
I-Rap Album Cover Clicks Singayenza Ngaphandle
10 Intetho ibonisa ukuba ukhangele Nangona usesikolweni saseNew York
Iinkcukacha ngokukhawuleza kwiPhondo laseQuebec
I-American dollar kunye ne-World Economy
Iimpawu ezi-3 zeShylock neNtetho
Iingoma ezi-100 eziphambili zeRa zee-2000
Indlela iBarometer isebenze ngayo kwaye inceda i-Forecast Weather
IRipon College Admissions
Indlela yokuphuma kwiSophomore Slump
I-Adland ye-Philander Smith College
AmaSolomon ayi-10 000 afela eTyrol ukusuka kwiiNtshontsho kwiMfazwe Yehlabathi I
IsiNgesi ngeenjongo zezoNyango - Ubuhlungu obuza kunye nokuhamba
Iimpawu eziphambili ze-John Hughes